Toddobaadka Wacyi -gelinta Dalxiiska oo diirada lagu saarayo Dalxiiska si loo helo Kobcin loo dhan yahay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Toddobaadka Wacyi -gelinta Dalxiiska oo diirada lagu saarayo Dalxiiska si loo helo Kobcin loo dhan yahay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Jamaica News Breaking • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Jamaica waxay u dabaaldegtaa Maalinta Dalxiiska Adduunka
Wasaaradda Dalxiiska Jamaica, hay'adaha dawliga ah, iyo la -hawlgalayaasheeda dalxiiska, oo ay ku jiraan Jamaica Hotel iyo Ururka Dalxiiska (JHTA), ayaa iftiimin doona doorka muhiimka ah ee dalxiisku ka ciyaaro kobcinta ka -mid -noqoshada iyo kobaca dhaqaalaha marka ay dhawrayaan Toddobaadka Wacyigelinta Dalxiiska (TAW) 2021.
Munaasabadda sannadkan ayaa noqon doonta dabbaaldegga awoodda dalxiiska ee ah in la wado horumar loo dhan yahay iyadoo fursado loo abuurayo malaayiin adduunka oo dhan ah.
Toddobaadka dhexdiisa oo dhan, Wasaaraddu waxay adeegsan doontaa warbaahinta daabacaadda iyo elektaroonigga ah si ay u muujiso dhowr ka mid ah hindisayaashooda.
Waxqabadyada kale waxaa ka mid ah bandhig bandhigeed 27 -ka Sebtember, riwaayad la taaban karo Oktoobar 1, iyo tartan fiidyow dhallinyaro ah.
Dabaaldegga sannadkan waxaa lagu dari doonaa Maalinta Dalxiiska Adduunka, oo sannad walba la xuso 27 -ka Sebtember Ururka Qaramada Midoobay ee Dalxiiska Adduunka (UNWTO) iyo meelaha adduunka oo dhan. Maalinta waxaa lagu xusi doonaa hal -ku -dhigga “Dalxiiska Kobcinta Loo Dhan Yahay,” kaas oo sidoo kale u noqon doona mawduuca TAW 2021, oo la qorsheeyay inuu socdo 26 -ka Sebtember ilaa 2 -da Oktoobar.
Waxay noqon doontaa dabbaaldegga awoodda dalxiiska ee ah in la wado horumar loo dhan yahay iyada oo fursado loo abuurayo malaayiin badan oo daafaha dunida ah.
Sida laga soo xigtay UNWTO: “Tani waa fursad aad ku eegto wixii ka dambeeya tirakoobka dalxiiska oo aad qirato in, lambar kasta, uu jiro qof… mustaqbalka. ”
Toddobaadku wuxuu ka bilaaban doonaa adeeg kaniisad oo la taaban karo Axadda, Sebtember 26. Toddobaadka oo dhan, Wasaaradda iyo hay'adaha dawliga ahi waxay adeegsan doonaan warbaahinta daabacaadda iyo elektaroonigga ah si ay u muujiyaan dhowr ka mid ah hindisayaashooda kobciya kobcinta loo dhan yahay. Waxqabadyada kale waxaa ka mid ah bandhig muuqaal ah 27 -ka Sebtembar, riwaayad la taaban karo Oktoobar 1, iyo tartan fiidiyaha dhalinyarada.
Wasiirka Dalxiiska Mudane. Edmund Bartlett wuxuu xusayaa ahmiyadda mawduuca, wuxuuna la wadaagay in hadafka Wasaaraddiisu, “ay had iyo jeer ahayd abuurista wax soo saarka dalxiiska halkaas oo faa'iidooyinka ballaaran si caddaalad ah loogu qaybiyo bulshada oo dhan.” Wuxuu hoosta ka xarriiqay in: “Dalxiisku wuxuu ku saabsan yahay beeraleyda, iibiyaha farsamada, madadaalada, iyo bixiyaha gaadiidka sida ay ku saabsan tahay hudheelka, makhaayadda, iyo hawlwadeenka soo jiidashada.”
“Dalxiisku waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn uguna dhaqsaha badan adduunka waana isha dhaqaale ee dalal badan. Jamaica, dalxiisku waa kibis iyo subag. Dalxiisku waa matoorka dhaqaalaheena. Waxay abuurtaa shaqooyin, waxay soo jiidataa maalgashi shisheeye, waxay hormarisaa kaabayaasha muhiimka ah, waxayna kor u qaadaa ganacsiga qaybaha kala duwan. Waxaa ka sii muhiimsan, waxay kor u qaadeysaa kobaca dhaqaalaha loo dhan yahay iyo isu -socodka bulshada, ”ayuu raaciyay.
In kasta oo koritaanka qaybta uu si weyn u saameeyay masiibada COVID-19, oo caqabad ku noqotay hawlaha dhaqaalaha adduunka, Bartlett wuxuu carrabka ku adkeeyay in joogtaynta iyo ka -mid -noqoshada ay muhiim u yihiin geeddi -socodka soo -kabashada.
“Dahabka dahabka ah ayaa ah in dhibaatada COVID-19 ay na siisay fursad aan dib ugu fikirno oo aan dib ugu dhisno warshadan adkeysiga leh si aan si wanaagsan u gaarno waajibaadkan. Joogtaynta iyo ka -mid -noqoshada ayaa laf -dhabar u ah geeddi -socodka soo -kabashada. Sidaa darteed, markaan ka faa'iidaysanno fursadaha ku jira xiisadda, waxaan hirgelinaynaa tillaabooyin istiraatiiji ah oo dib loogu dhisayo badeecad badbaado leh, loo siman yahay oo u abuureysa fursado dhaqaale celcelis ahaan Jamaica, ”ayuu yidhi.